Fahfaahin ku saabsan khasaaraha Qarax ka dhacay Muqdisho | Keydmedia
Fahfaahin ku saabsan khasaaraha Qarax ka dhacay Muqdisho
Qarax ayaa ka dhacay laanta Dhexe ee Ilaalinta Canshuuraha iyo Dhaqaalaha Muqdisho, ka Soo hor jeedka Dekada weyn ee Muqdisho, oo ah isha dakhliga dowladda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax is-miidaamin ahaa oo saakay abaare 7:00 am ka dhacay Laanta Dhexe ee Ilaalinta Canshuuraha iyo Dhaqaalaha Muqdisho, ka Soo hor jeedka Dekada weyn ee Muqdisho.
Gaariga ayaa lala rabey in lagu qarxiyo dhismo cusub oo dowladda leedahay oo ku yaalla afaafka hore ee Dekadda, laakiin ma uusan gaarin bartilmaameedkiisa kadib markii Ciidamo ku sugan bar-koonatarool ee meesha ku dhaw ay rasaas ku fureen kaidbna halkaasi uu ku qarxay.
Sarkaal katirsan booliska dowladda ayaa u sheegay Keydmedia Online inuu qaraxa dhaawac gaarsiiyay 7 qof, iyadoo burbur weyn uu goobta ka dhacay. Illaa hadda waxaa la ogyahay in kaliya ninkii qaraxa waday ee is-miidaamiyaha ahaa uu ku geeriyooday weerarka.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa saakay, oo lagu soo beegay xili subax ah oo shaqaalaha ay sii galeen Dekadda Muqdisho, sidoo kalena mashquul badan uu ka jiray xaruumaha dowladda ee halkaasi ku yaalla.
Inta badan Al-Shabaab ayaa qaraxyada la eegata goobaha muuhiimka ah ee Caasimadda ku yaalla, sida huteelada, Xafiisyada dowladda iyo meelaha kale ee dadweynaha isagu yimaadaan, si uu u bato khasaaraha.